टाउको दुखाइ कम गर्न के गर्ने ? - Naya Patrika
टाउको दुखाइ कम गर्न के गर्ने ?
वापुस्तादेखि वृद्धसम्मले टाउको दुख्ने समस्याले हैरान भएको दुखेसो पोखिरहन्छन् । टाउको दुखेकै कारण आफ्नो दैनिक काम गर्न नसक्ने पनि धेरै छन् । कतिपय जति औषधि खाँदा पनि टाउको दुख्न कम नभएको दुखेसो पोखिरहन्छन् ।
हाम्रो दैनिक अव्यवस्थित जीवनशैली, खानपान, धुवाँधुलो, तनाव, अनावश्यक सोचाइ इत्यादि कारणले टाउको दुख्ने समस्या भइरहन्छ । हामीले हाम्रो दैनिक जीवनशैली परिवर्तन गर्‍यौँ भने पक्कै पनि टाउकोदुखाइ कम हुन्छ । अव्यवस्थित जीवनशैली त्यागेर योग अभ्यासमा ध्यान दिएको खण्डमा टाउकोदुखाइको समस्याबाट छुटकारा पाउन सकिन्छ ।
-खाली पेटमा योगा गर्दा सबैभन्दा उत्तम हुन्छ । आफ्नो समयअनुसार बिहान, दिउँसो र बेलुका गर्दा हाम्रो शरीरलाई फाइदा पुग्छ ।
-पहिले आफूलाई सजिलो हुने आसन छान्नुपर्छ । ता कि योग समयमा अरू केहीको परवाह नगरी आफ्नो ध्यान योगमा मात्र लगाउन सकियोस् । बस्न सहज र योग क्रियाका क्रममा कुनै अवरोध नहुने आसन रोज्नुपर्छ ।
-शरीरलाई आरामसँग राख्नुपर्छ । योगका क्रममा शरीरलाई चलाउँदा शरीरका सबै अंग राम्रोसँग चलाउन सक्नुपर्छ ।
-ढाड, गर्दन सीधा पारेर चकटीमा बस्नुपर्छ । ढाड गर्दन सीधा भएन भने गरिरहेको योग विधिले हाम्रो शरीरलाई नकारात्मक असर गर्न सक्छ ।
-पहिले दायाँ हातलाई नासिका मुद्रा बनाएर, श्वास दायाँबाट लिई बायाँबाट फाल्नुहोस् र पुनः बायाँबाट श्वास लिई दायाँबाट फाल्नुहोस् । त्यस्तै, यो प्रक्रिया उल्टोबाट गर्नुहोस् । अभ्यास कमसेकम १० मिनेटसम्म गर्नुहोस् । यसले गर्दा हाम्रो टाउकोमा अक्सिजन पुग्छ ।
-यो क्रममा श्वास तान्ने प्रक्रिया समान हुनुपर्छ । कुनैमा छिटो, कुनैमा ढिलो गर्नुहुँदैन । यस्तो प्रक्रियालाई बिस्तारै–बिस्तारै बढाउँदै लान सकिन्छ ।